Foomamka Cinwaanka Boostada ee Kordhiya taraafikada
Sirta Ugu Dambeysa ee Cusub Sida Loo Top 10 Guide
Axad, Juun 18, 2010 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Cinwaannada ayaa ka mid ah qaybaha ugu yar ee la dhayalsaday ee ku jira boggaaga ama bartaada internetka. Fasal kasta oo aad waligaa qorto wuxuu kuu sheegay in cinwaan weyn uu soo koobayo sheekada. On webka, ma aha heshiis isku mid ah. Waxaan u qori lahaa cinwaankan "Qorista Cinwaannada Boostada"… cidina ma riixi lahayd.
Mid ka mid ah waxyaabaha aad ka heli doontid qorayaasha xirfadleyda ee shabakadda ayaa ah inay adeegsadaan isla qaaciddada markasta soo jiidashada taraafikada. Cinwaankeyga boostada waa yar yara jeesjees… laakiin xaqiiqda ayaa ah in farsamooyinkan ay shaqeeyaan. Halkan waxaa ah toban nooc oo cinwaanno boosto ah oo ku dhiirrigalin doona kuwa dheereeya inay ku dhejiyaan farriimahaaga.
Sida loo… Badan yahay, Ka Fiican, Deg deg badan - ka faa'iideysiga sida loo isku daro natiijo fiican.
Liiska 5, 10, 100 ee ugu sarreeya - Aad uma badna… inaad iskudayeyso inaad wax weyn sheegto mooyee. Akhristayaashu waxay jecel yihiin liis.
Su'aal Jawaab - Weydii su'aal uu qof walba weydiiyo ka dibna si maldahan u tuso jawaabta.
Cajiib, Muhiim ah, Aakhir, Hubsiimo - Adeegso ereyada kicinaya shucuur xoog leh taas oo ah macluumaadka ugu fiican ee qof walba uu ka heli karo meel kasta.
Free - Yup, dadku wali waxay jecel yihiin heshiis bilaash ah.
Maxay Tahay Kan Ugu Fiican, Caanka Ah, Taajirku - Waxaad dooneysaa inaad ogaato waxay garanayaan, maahan?
Tilmaanta Sirta, Qaaciddada - Hadday sir tahay, xiisahayagu wuxuu naga helayaa sida ugu fiican.
Deg Deg ah, Degdeg ah, Waqti ku habboon - Waqti badan ma haysano maalmahan, adeegso ereyo dejiya rajooyin ah in macluumaadka si dhaqso ah loo hayn karo.
Tirooyinka waaweyn, Boqolleyda waaweyn - Akhristayaasha waxaa soo jiitay tiro aad u tiro badan.
Guul, Guul, Guul - Dadku way neceb yihiin inay lumiyaan. Tus sida looga fogaado!
Bogga natiijooyinka mashiinka raadinta (SERP), waxaad kula kulantay a cinwaan iyo sharaxaad - waa intaas! Kuwani waa labada qaybood ee kaliya ee akhristaha arko kahor intaadan go'aansan inaad gujiso ama aanad booqan bartaada. Cinwaanka ayaa laga soo qaatay adiga cinwaanka bogga cunsur Haddii aad qoreyso qoraal boosteejo ah, taasi caadi ahaan waxay ku habboon tahay cinwaanka boostadaada. Sharaxaaddaada waxaa laga qaadan karaa nuxurka bogga, laakiin haddii aad leedahay a sumadda tilmaanta meta, makiinadaha raadinta ayaa badiyaa qaadan doona nuxurkaas halkii.
Miyaad riixday Waan ogahay inaad rabto!
Haddii aad eegto hareeraha webka maqaallada dareenka ugu badan hela, cinwaannadan soo jiidashada leh ayaa had iyo goorba iyaga ka sarreeya. Waxaan dhawaan u sameeyay falanqeyn macmiil ku saabsan cinwaankooda bogagooda iyo tartamayaashooda - waxaana ogaanay inay runti si wanaagsan u kala sarreeyeen marka lala barbardhigo tartamayaashooda laakiin gujintooda illaa heerka (CTR) way hooseeyeen.
Isticmaalka wax ku oolka ah ee ereyada muhiimka ah iyo cinwaannada boostada ee qasabka ah ayaa saameyn weyn ku yeelan kara taraafikadaada. Waqti badan ku bixi qoritaanka cinwaankaaga boostada sida waxyaabaha laftiisu tahay!
Isku-darka guusha ee badeecada, doorashada, iyo qiirada
Goorma ayuu SEO mudan yahay $ 100 Million?
Jul 19, 2010 markay ahayd 7:03 AM
“Qaaciddada Bilaashka ah ee Bilaashka ah waxay Soo Bandhigtay 10-ka Sir ee Sirta ah ee Dadka Caanka ah ay u adeegsadaan abuurista tirooyin waaweyn isla markaana si dhakhso leh ugu guulaystaan
Jul 20, 2010 markay ahayd 9:42 AM
LAAKI WAAR, WAA BADAN YAHAY! SAMEe HADA oo hel nuqul labaad oo ah Blogging Corporate for Dummies FREE - kaliya bixi maraakiibta iyo habeynta iyo maaraynta kaliya $ 16.49!
Ka dibna kor u qaadistaada ugu horreysa waa Suuqa Suuqgeynta ee Dummies oo ay ku xigto 20% tikidhkaaga Blog Indiana!